Indawo yokusabela: Ikhaya elinoxolo kunye neligqibeleleyo ePella
Indawo yokusabela likhaya elihle elinobuhlobo kusapho nje iibhloko ezimbini ukusuka kwisithili sembali sasePella. INdawo yokuKhusela ibonelela ngendawo yeholide ekhumbulekayo kubantu, izibini kunye neendibano zosapho. IPella izele ziivenkile zekofu, iibhakabhaka ezimnandi, iimarike zenyama, iindawo zokutyela, kunye neevenkile ezininzi ezizodwa. Nditsho ivenkile kaFido! Elona chibi likhulu kwi-IA likumgama oziikhilomitha ezi-5 elibamba imidlalo yamanzi ekhethekileyo. I-Knoxville kunye neNewton, i-IA Speedways kukuhamba nje okufutshane. Yiza uzonwabele!
Indawo yokusabela ifumaneka kwiibhloko ezi-2 ezimfutshane zokuhamba ezilula ukusuka entliziyweni yePella, IE "Isikwere". Ikhaya li-1350 sq. ft ngobukhulu kunye negumbi lebhonasi elongezelelweyo kwigumbi elingaphantsi. Ngo-2017 isiseko esitsha sagalelwa ukuze igumbi elingaphantsi likhanye ngeefestile ezi-2 eziphumayo, igumbi lokuhlambela elitsha eline-5 ft yokuhamba kwishawari, indawo yokulala eneebhedi ezi-2 kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo elinewasha entsha. Kananjalo abantwana baya kuyithanda indawo yokudlala kunye nezinto zokudlala ezininzi ezibonelelweyo. Umgangatho ophambili unamagumbi amabini okulala (ukumkanikazi kunye nesibini) igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala. Phezulu yenye igumbi lokulala elikhulu (ukumkanikazi) kunye negumbi lokulala elincinci eliwele elilungele abantwana. I-TV ineenketho zeNetflix, i-Amazon njl. Zisa igama lakho lokugqitha. Kukho iiDVD ezininzi ezikhoyo. Ewe, isikolo esidala! Kunye neendidi zabantwana ukuya kwiincwadi zabantu abadala kunye nemidlalo. Omabini amagumbi okuhlambela aye ahlaziywa kakhulu kule minyaka mi-2 idlulileyo ngohlaziyo lwasekhitshini ngokunjalo. Iziko, i-AC, kunye nesifudumezi samanzi ashushu nazo zonke zintsha kule minyaka mi-4 idlulileyo. Phaya ngasemva yigadi eyamkelekileyo ehlala ihleli ethe ngcu kuthotho lwamachibi ama-3 amancinci. Yonwabela umbala osoloko utshintsha wegadi njengoko uhleli ecaleni komlilo kunye neemarshmallows ezigcadiweyo! I-grill grill ene-3 burners nayo ifumaneka kufuphi ne-patio egqunyiweyo. Indawo yokuhlamba impahla inebhodi yokuayina eneayini ekhoyo. Indlu inazo zonke iifestile zePella ezintsha. Sinikezela ngokufikelela kulo lonke ikhaya ngaphandle kwendawo yokusebenzela esezantsi kunye namagumbi ambalwa kwikhaya lonke.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-3, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Indawo esihlala kuyo inamakhaya ukusukela ngeminyaka yoo-1860 ukuya koo-1950. Imithi emininzi yethunzi. Umgama olula wokuhamba ukuya kwindawo yokuthenga yembali yasePella / ulonwabo / indawo yokutyela. Ikhuseleke kakhulu!
Unyana wam kunye nomolokazana wam baya kuba ngabamkeli basekhaya. Ziyafumaneka kwiimfuno zakho zangoku kwaye zihlala iibhloko ezimbalwa ezimfutshane kude.